Isihloko nomholo ku-intanethi ekujabulisayo izingqondo zabaningi - efana labo dream mayelana imali eyengeziwe, futhi labo bayokujabulela ushiye zonke ehhovisi futhi basebenze lapho kukhona laptop. Amaholo ongakhetha ukunciphisa - okukodwa ongakhetha kukho. Kuyini, uma ungakwazi ngempela ukwenza imali ngale ndlela - ukufunda lesi sihloko.
Ukuncishiswa inkomba - kuyini?
Uma uvula noma yiliphi isayithi manje, uzobona ukuthi yekheli inombolo ngokwanele enkulu izinhlamvu. Ngezinye izikhathi ziziningi ukuze bakwazi ukuthatha imigqa ambalwa umyalezo.
Ngokusobala, lokhu kungelula kakhulu uma ufuna ngokushesha idlulisele ukwaziswa umuntu. Ukuze zilawule ngocingo kule sethi akunakwenzeka, ubhale ephepheni, futhi. Okuthunyelwe ekuxhumaneni nomphakathi kulinganiselwe inani lezinhlamvu, futhi ekugcineni, konke kubukeka ugly, futhi ngezinye izikhathi ngeso lengulube.
Phuma kusukela isimo litholakele. Izixhumanisi zingancishiswa ngosizo amasevisi ekhethekile. lophawu Long uguqulwe ube ikheli enhle, ehlanganisa esiphezulu kwamadijithi eziyishumi. Leli kheli sizikhandle sandile yokuxhumana, it is kalula ziqondakala indlebe, kubukeka ezikhangayo.
Amasevisi ezikuvumela ukwenza izixhumanisi pretty okuningi. Dlulisa ngeke bahlanganyele, ulwazi kalula etholwe ngokuxhumana iyiphi injini yokusesha.
Amaholo at izixhumanisi ekunciphiseni
Indlela ilula. Imali yokukhokhela abantu owayegade ukukhangisa, ukuze wenze ukushintshela ku-isixhumanisi ukuthi othumele. Ingabe udinga ingqikithi tinyatselo letine: kwenta
Ngo ukushona isixhumanisi saba ifaka phakathi ukukhangisa.
Yengeza isixhumanisi kunoma indawo kuyi-Internet.
Khokhelwa lokho abantu nenze nalesi.
Ukukhokhela ukuhwebelana encane, ukuze amasenti 50. Plus indlela wukuthi kuba yekwentiwa. Okungukuthi, uma kwanele ukushicilela, bese nje ulinde ubone ukuthi ukuvuza imali. Kufanele kuqondwe ukuthi nomholo izixhumanisi ukunciphisa, ngokuvamile encane. inhlokodolobha Huge kule ngeke akwenze.
Bonisa ukuthi zanqwabelana ngesikhathi ukuhwebelana, kungenzeka kuselula ngenxa zonke opharetha mobile Russian. Ayikho Ikhomishana icala. Kungenzeka futhi ukuba bafinyelele esiphethweni ngalolu daba lwemali izinhlelo eziyisisekelo: "Webmoney", "Yandex" kanye nabanye abaningi. Lokukhipha iqala esincane ngisho ruble. Izinkokhelo osheshayo.
Futhi ungakhohlwa mayelana nomholo isimemo esikulo abasebenzisi uhlelo. Ngamanye amazwi, achaze kubangani ukuthi nomholo izixhumanisi Inthanethi zokunciphisa - kuhle, ukubhalisa kwabo ohlelweni e yayo yokudluliselwa izixhumanisi, ukuthola amaphesenti omholo wazo.
Platform ngesizathu Amaholo
Kunengqondo ukuthi ukuze wenze imali, udinga ukubeka link lapho bangakwazi ukubona abantu. Eyokuqala zokuxhumana. Ungakwazi ukubophela amandla Amakhasi yabo siqu. Ngisho kangcono, uma une iqembu okungukuthi ikakhulukazi kahle, uma iyathandwa.
Esinye isici esizovumela ukuthola ukunciphisa iholo izixhumanisi - lena iforamu. Uma uthanda ukuba baxoxe, wenza ngokuvamile, ke kungani kungenjalo? Ngisho kangcono, uma une iwebhusayithi noma ibhulogi yakho. Yiqiniso, kufanele akuzi nje wena.
Uma uthumela isixhumanisi sokulanda iziphi izinto, khona-ke le ndlela lungasetshenziswa. Izinhlu lwamakheli nge e-mail. Ingase futhi wahlela kwi izisetshenziswa, uma kungenziwanga kungavunyelwa imithetho. Ngisho ukuthumela izixhumanisi imiyalezo eyimfihlo kanye nama-imeyili, ungakwazi ukuthola.
Abelana kufanele ulwazi oluyigugu ngempela ke umsebenzisi umane ophoqelelwe kudingeka ubuke izikhangiso. Lokhu kungaba izihloko nezithombe, lutho.
Udaba liyinkimbinkimbi. It kuxhomeke ekutheni uyakusebenzisa uvakashele isayithi. Noma pre-izimali zakhe kuko, ukuba ngumnikazi site anjalo.
Kulotshweni kwi-inthanethi mayelana nomholo wokwehla inkomba? Izibuyekezo wathola ezihlukahlukene. Kukhona isibonelo ukuthi amahora amathathu ruble 8 "self-agcwalisa". I izibalo ezilula kuholela esiphethweni sokuthi enyangeni edlule, omunye isixhumanisi kungaletha ruble 1,800. Three kweshumi ibekwe kahle izixhumanisi - ungakwazi kakade ubhale incwadi yokwesula ehhovisi bese uya climes ukufudumala.
Yiqiniso, zikhona iphawula nokuthi kuwukuchitha isikhathi. Yisiphi isiphetho na?
Umholo zokunciphisa izinkomba: Uhlelo
Kukhona funa - ngeke anikele. Kuyi-Internet kukhona amasevisi enziwe ngokugcwele ezikuvumela uthole amalinki. Omunye wabo okuthiwa Catcut. Bhalisa osheshayo, badinga kuphela ukuze ufake ikheli le-imeyili.
Kwenye indawo, imisebenzi ehlanganisiweko ukunciphisa izixhumanisi, isevisi ngemali kubo futhi uhlelo kokuhoxiswa kokuhlelwa imali. Ihlangene, kungenziwa zonke izenzo ezenziwe endaweni eyodwa.
Yiziphi iziphetho esingasithola? Amanethiwekhi Social izixhumanisi mfushane ziqondakala njengoba osolisayo, njengoba isixwayiso lapho sizama ukuhambisa. "VKontakte" ushintsho ekugcineni nje amabhlogo. Abangane kusheshe kakhulu aqale ukungakuthandi yokuthi uthola kusuka kunoma iyiphi imininingwane ewusizo kuphela emva 13 imizuzwana of izimakethe yokubuka. Kodwa ngokuvamile, uma unentshisekelo, zama, yebo. Mhlawumbe kuzoba ulungiselelwe kahle.
Qhathanisa Dating Pro ne PG SocialBiz
I-AMD FX-4350. Ukubuka ngokugcwele nokuhlolwa kweprosesa